Al Shabaab oo weerar ka geesatay gudaha Kenya iyo Faah faahino kasoo baxaya | Dhexnimo Media
Home Wararka Al Shabaab oo weerar ka geesatay gudaha Kenya iyo Faah faahino kasoo...
Al Shabaab oo weerar ka geesatay gudaha Kenya iyo Faah faahino kasoo baxaya
Dagaalyahano hubeesan oo katirsan Al Shabaab ayaa weerar ku qaaday shaqaale Kenyan ah oo ku hoolanaa dhismaha wado isku xirta Lamu iyo deegaanka lagu magacaabo Garsen oo katirsan gobolka Xeebta Kenya.
Warbaahinta dalka Kenya ayaa ku warantay in dagaalyahanada weerarka qaaday iska caabin kala kulmeen ciidamada Kenya ee ilaalada ka hayay wadada dhismaha ka socday ee weerarku ka dhacay.
Taliyaha Ciidanka Booliska Gobolka Lamu Moses Murithi oo la hadlay Warbaahinta Kenya ayaa sheegay in ay iska difaaceen weerarka Al Shabaab kusoo qaadeen, waxa uuna tilmaamay in weerarkaasi wax khasaare ah uusan kasoo gaarin dhankooda.
Waxa uu sheegay taliye Moses Murithi in weerarada Al Shabaab yihiin kuwa lagu doonayo in lagu carqaladeeyo amaanka wadooyinka gobolka, balse aysan taasi suurto gal noqoneyn una taagan yihiin sidii ay uga hortagi lahaayeen kooxdaasi.
Al Shabaab ayaa weeraro joogta ah ka geesata gudaha dalka Kenya gaar ahaan gobolka Waqooyi bari dalka Kenya iyo gobolka Xeebta, waxaana weeradaasi ka dhasha khasaarooyin kala duwan.
Previous articleTurkiga Oo Maraykanka Si la’yaab Leh uga Caawinaaya Coronavirus
Next articleAl Shabaab oo Qorsheeneysa Weerar loo adeegsado diyaarado oo ka halis badan kii 2001-dii